Marunbaa kubada cagta!?
Saturday July 10, 2021 - 10:36:23 in Articles by Xaaji Faysal
Maxa kajira siyasada galbeedka ee kubada cagta!?
Kubada cagta waa sportska ugu madadaalada badan uguna tageraha badan uguna caansn!.
Hagaag yaa ugu tageera badan ugu goal badan ugu cup badan!?
Galbeedku waa kuwa gacanta ku haya ama maamula aduunka marka laga sootago Allah oo faraha inooga qaday dunida!.
Galbeedka ama Yurub iyo america labadaa qaarad waa kuwa gacanta ku haya caalamka qasatan kubada cagta!
Dunida waxaa ugu weyn qaarad ahaan aasiya iyo afrika! Mahn galbeedka ama qarad amerika!
Sabab dunida gacanta ugu hayaan!?
Waa siyasada xag jirka ah ama hab mamulidoda oo aay midba midkale ku qanciyeen!.
Aan u imaano kubada cagta oo maqaalkeena ku saabsanyahy!;
Kubada cagta waa mid kamid ah kuwa aay gacanta ku hayaan kaliya galbeedka waxa aay gacanta ku haanin waa diinta islamka uun! Wayo Allah ayaa diinteena suban difaco marwalpa!.
Kubada cagta cup kamid ah kaa oo ah mid kamid ah kan ugu xamasada badan waana World Cup! Si ahaan hadaa ufirino waxaa dhihi karnaa waa Galbeed Cup! Yacnii ayaga uun ayaa qada sabab ma ayagaa ugu laacibsn!?
Latin america oo america katirsn iyo galbeedka oo Europe ah uun ayaa qaday!
North America ama marekanna kuba cagta hablaha ayagaa haya waxa ugu xamasad badan ayaa ah horyalka qaradooda ee Chanpions League,waxa ugu tagera badan ama ugu xamasada badan ayaa ah horyaladooda ee kala ah laliga,primary league IWM!.
Ok aan u imaano ciyartoyda waxaa ugu lacibsn ayaa ah labadan nin oo kala ah Ronaldo Iyo Messi oo ah kuwa ugu lacibsn aduunka ayago somareen hada si sax ah lo firiyo waxa jiray kuwa kalacibsan! 11sano ayaga qaday uun sbbtuna ayaa ah mid waxa uu kasocdaa Yurub Midna Amerika!.
Sanada ugu dambesay ee uu messi qaday waxaa kaga lahaa Salah hadi dacad loo firiyo!
Kubada cagta waa siyada waliba qasatan galbeedka waxa aayna udajiyaan xelado oo marba horyaalkooda mid kamid ah kala kacsn marna ciyartooy ayaga kasocda laka kicinaa! Mahan mid macquuo ah in laba ciyartooy aay noqdaan kuwa ugu fcn aduunka mudo 11sano ah ayago aay jiraan dhowr ciyaartooy oo lacib ah kuwa hore oo laga yaban maan ahen lacibtinimadoda maan aheen saan!!
Marwalba kubada cagta waxa ugu fcn Mhn ronaldo Iyo messi ee waa galbedka iyo america!
African ma qado world cup lkn ciyartoydoda ayaa qaada oo wadan kale udhelaya waan ogahy qofbaa saas dhihi lahaa oo ah african lee uqado lkn maya maya arinkaa saas mahn ciyartoyda africanka waa waxay ayaga ugu talagalen si aay ayaga u helan cupka uguna qancaan kuwa kale ayee saa samenayaan oo hada ogthy 2018kii oo messi qadayay lacib aduun salah ayaa kalahaa oo waxaa lasiyay goalka ugu qurxoon dunida sanadkaasna waxaa kalahaa ronaldo si dacad hada lohadlo ronaldo ayaa ka goal qurxona salah oo dhawal ahed lkn sababta loo siyay ayaa ahed qancinta afrika iyo islamka sida hada nologu qancii nolagana dhaadhicii ayaa ah siyasad iyo war saxafadeed!.
Ugu dambeen aniguba kubada cagta waa aan dawadaa lkn waxan halkaa laga sari karin inaay tahay sida aflamta cml oo madadaalo yacnii aay galbeedka marba qof nagu soodhisayaan yacnii aay sida raban u wad wadan waxa aay rabaan kaliya aan ahen kubada cagta ee ah inta kaso harta islamka!.